Khayre oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka raalli-geliyay - Axadle | Wararka Africa
Raysul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo shalay dib ugu soo laabtay Muqdisho ayaa xalay hoygiisa ugu tagay Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Khayre ayaa Warsame kala hadlay weerarkii lagu qaaday hoygiisa ee dhacay 17-kii December 2017-kii, waxa uu xiligaas ahaa Raysul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya, waxaana ka dhashay khasaare kala duwan.
Weerarkii ka dhacay Hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa uga dhintay xunbo la shaqeynayay, halka uu ku dhaawacmay, isla markaana la xiray, ugu dambeyn Maxkamad lasoo taagay.
Khayre ayaa ka garaabay dhibka gaaray Cabdiraxmaan Cabdishakuur, qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook waxa uu sheegay in uu ka raalli-gelinayo dhibka gaaray hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir.
“Waxaan caawa hoygiisa ku soo booqday hogaamiyaha xisbiga wadajir, ahna musharrax madaxwayne ee jamhuuriyada federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdiraxman cabdishakuur Warsame, halkaas oo aan si walaaltinnimo ku dheehantahay isugu soo qalbi xaarannay, Waxaana ka raalli galiyay dhibkii 17kii December 2017 isaga iyo ilaaladiisa kasoo gaaray dhacdadii ka dhacday hoygiisa” ayuu yiri Xasan Cali Khayre.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dhankiisa qoraal uga jawaabay booqashada raalli-gelinta ah ee uu ugu tagay Raysul Wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo haatan kamid ah musharixiinta Hogaamiyaha Soomaaliya 20/21.
“Waxaa caawa xarunta Xisbiga Wadajir nagu soo booqday Raysalwasaarihii hore ee Soomaaliya, ahna musharrax madaxweyne Md Xasan Cali Kheyre. Kheyre wuxuu cudurdaar iyo raalli gelin ka bixiyey weerarkii 17-kii Dec 2017. Waxaan ugu baaqaynaa masuuliyiinta kale ee dowladda ee weerarka ku lug lahaa in ay fursaddan oo kale weli u furan tahay” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.